နေမျက်နှာပြင်ရှေ့မှ ဖြတ်သန်းသွားမည့် သောကြာဂြိုလ် « MMWeather Information BLOG
« တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 92W စတင်ဖြစ်ပေါ် တရုပ်ပြည်တွင်ဂေါက်သီးအရွယ်မိုးသီးကြွေ။(Gansu Province hail stone) »
By mmweather.ygn, on May 13th, 2012
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက် နံနက်ခင်း နေထွက်ပြီးချိန်မှ စ၍ အာဖရိက၊ ဥရောပနှင့် အာရှနိုင်ငံများမှ နေပေါ်တွင် သောကြာဂြိုလ်အား ဖြေးညှင်းစွာရွေ့လျားလျှက်ရှိသည့် အစက်အပြောက်ကလေးအဖြစ် တွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် 01:32:17 မှ 04:49:46 UTC အချိန်အထိ(မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၈း၀၂ မိနစ်မှ ၁၁း၁၉ မိနစ်အထိ) နေ၏ အထက်ပိုင်းမှ ဖြတ်သွားသည့် သောကြာဂြိုလ်ကို တွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ စတင် မြင်တွေ့ရမည့် အချိန်မှာ ဘန်ကောက်မြို့မှ မြင်ရသည့် အချိန်ထက် မိနစ် ၃၀ စောမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၇၆၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က တစ်ကြိမ်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး၊ ထိုအချိန်က နေ၏ တောင်ဘက်ပိုင်းမှ ဖြတ်သန်းသွားကြောင်း၊ ၆ နာရီကျော် ကြာမြင့်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ မြင်တွေ့ရသည့် နေတောင်ဘက်ပိုင်းမှ သောကြာဂြိုလ်ဖြတ်သန်းနေသည့် ဓါတ်ပုံ
Venus Transit from Vallentuna, SwedenCredit: P.M. HedenThe transit, or passage, of Venus across the face of the sun is one of nature’s rarest celestial phenomena. This image was captured by P. M. Heden in Vallentuna, Sweden on June 8, 2004.
အာဖရိက၊ အာဖရိက၊ ဥရောပနှင့် အာရှနိုင်ငံများမှ မြင်တွေ့ရမည့် အချိန်ဇယားကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြပေးထားပါသည်။
Table 2a                delta T =    75.0 s
Willemstad, Curac�  22:04:36  11   22:22:24  7     --      -      --      -      --      -
အောက်ပုံမှာ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် USA မှ၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် အာရှမှ တွေ့မြင်ကြရမည့် နေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှ သောကြာဂြိုလ် ဖြတ်သွားမည့် ပုံအား animation ပြုလုပ် ဖေါ်ပြထားသည့် ပုံဖြစ်ပါသည်။
သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ Venus-transition-2012-JUNE « တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 92W စတင်ဖြစ်ပေါ် တရုပ်ပြည်တွင်ဂေါက်သီးအရွယ်မိုးသီးကြွေ။(Gansu Province hail stone) »
2 comments to နေမျက်နှာပြင်ရှေ့မှ ဖြတ်သန်းသွားမည့် သောကြာဂြိုလ်
Log in to Reply	ဇယားမှာ မြန်မာ မပါ ပါလား ?
Log in to Reply	အဲဒီဇယားကို နာဆာက ထုတ်တာ Sanction တွေ ဟော့နေတဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်လောက်က ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် – အဲဒါကြောင့် မပါတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ 😛
« တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 92W စတင်ဖြစ်ပေါ် တရုပ်ပြည်တွင်ဂေါက်သီးအရွယ်မိုးသီးကြွေ။(Gansu Province hail stone) »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum